MITANDRINA SUGAR GLIDER HO FAMPAHALALANA MOMBA NY BIBY SY SARY - ALIKA
'Ny glider vavy misy ahy, Gloria sy ny zanany (iray volana eo ho eo taorian'ny nivoahany) dia nanadihady ny fakantsary.'
Marsupial arboreal kely, volondavenona volondavenona miloko misy tadiny maizina any aoriana. Ny santimetatra farany an'ny rambony dia mainty ihany koa. Izy ireo dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana iray mitovy amin'ny kangaro, kibo, opossum ary devoly Tasmanianina.
Ny glider glider dia biby amin'ny alina, midika izany fa matory izy ireo mandritra ny andro ary amin'ny alina mifoha. Any an-ala, ny glider glider dia milalao amin'ny zanatany, saingy mitandrina sy miaro azy mpiditra an-tsokosoko . Rehefa mahita ny mpiditra an-tsokosoko dia hanainga ny feony mikotrokotroka arahin'akanjo mafy izy ireo raha misy ny ady. Tsy mora ny mampandeha glider siramamy efa matotra, na izany aza mora ny mampandeha glider siramamy zazakely amin'ny fihazonana azy ireo mandritra ny ora maromaro isan'andro raha mbola tanora tokoa izy ireo. Ny glider tsy voatanisa dia mitaky fotoana sy faharetana be. Raha te hanana glider cuddly ianao dia aza hadino ny mandray an'io izay efa nitantana be sy nifanerasera tsara. Mifanaraka mafy amin'ny olona iray izy ireo, mazàna ilay olona nitana azy ireo indrindra ary nandany fotoana be indrindra niaraka taminy. Na dia hanara-maso olona vaovao aza izy ireo dia miverina amin'ilay olona nifamatorany hatrany. Tena mpihetsiketsika izy ireo ary tena mpiara-belona ary tsy tia miaina samirery. Raha te hanana glider siramamy ianao dia manomàna hanana mihoatra ny iray. Ny glider irery siramamy izay tsy manana fifandraisana ara-tsosialy dia tsy hiroborobo. Ho ketraka izy io, ka mety hahafaty azy. Manidina amin'ny tompony ny glider Sugar. Mila fifampiraharahana be dia be izy ireo ary hahafinaritra azy ireo mihitsy ny mitaingina eo am-paosinao tontolo andro, na raha manao lobaka roa ianao dia hipetraka eo anelanelan'ny lobanao ny glider (ny akanjo faharoa dia manakana anao tsy ho voarangotra). Any an'ala dia mandrafitra zanatany misy glider fito ao amin'ny zanatany iray izy ireo. Ao amin'ny zanatany dia manana baiko izy ireo ho mpitondra hatrany amin'ny farany ambany amin'ny laharana. Manana toetra mahafinaritra sy sariaka izy ireo. Sugar Gliders dia 'mitsoraka' amin'ny alàlan'ny fitsambikinana zavatra. Namelatra ny hoditr'izy ireo antsoina hoe patagium izy ireo izay mivelatra eo anelanelan'ny tongony aloha sy aoriana. Mampiasa ny rambony lava izy ireo mba hitarika azy rehefa mivezivezy mihoatra ny zato metatra izy, manamboatra ny fihodinan'ny hodiny arak'izay lalana tiany haleha. Ny mpamily siramamy dia tsy mampisy kandidà hanangana trano. Maranitra ny nifin'izy ireo, ary na dia tsy manaikitra aza izy ireo matetika dia afaka raha matahotra sy mandrahona izy ireo. Ny mpitsabo siramamy dia mila tsaboina amin'ny fitiavana, fanajana ary fahalemem-panahy. Tsy mamaly mihitsy ny sazy na ny fanapahana izy ireo.
Halavany: 6.3 - 7.5 santimetatra (16 - 20 cm) Ny Sugar Glider dia sahala amin'ny haben'ny gerbil rehefa lehibe. Manana rambony lava lava izy ireo, izay mitovy halava amin'ny vatany (20cm).
Milanja: 100-160 grama.
Trano lehibe iray, ny lehibe kokoa noho ny tsara kokoa, dia tokony omena zavatra betsaka hitsambikina sy hitsambikina (farafahakeliny 24 x 24 santimetatra, 36 hakiho ny haavony). Ho an'ny glider siramamy, ny haavony dia sarobidy kokoa noho ny habaka amin'ny gorodona. Fehin-tariby, ny tariby dia tokony tsy mihoatra ny ½ santimetatra ny sakany, tsara indrindra ny mamela ny tranony hifoka rivotra. Ny fantsom-plastika dia azo apetraka ao ambanin'ny tranom-borona mba hisamborana potipoti-javatra mety hianjera avy ao anaty tranom-borona. Kilalao marobe no tokony homena ary koa kodiarana fanatanjahan-tena, boaty misy akany ary / na paosin-glider. Ny sampana, tady ary tohatra dia hanome fotoana betsaka amin'ny fiakarana sy fanatanjahan-tena.
mpiandry ondry aostraliana mainty sy fotsy
Ny glider glider dia zavaboary kely madio. Raha tazominao ho madio ny tranony, dia saika tsy misy fofona izy ireo.
Tokony ho voahaingo tsara ny hoho. Mety ho maranitra izy ireo ary hanakorontana anao rehefa mihady izy ireo hanandrana sy hianika na hiantsona aminao.
Ny filàna famahanana glider siramamy dia somary mampiady hevitra. Vao tsy ela akory izay no nitazomana azy ireo ho biby fiompy, ary somary misitery ihany ny filàna. Rehefa mandeha ny fotoana dia hahafantatra bebe kokoa momba ny filan'ireo zavaboary kely ireo ny olona. Sugar glider dia omnivora, midika izany fa hihinana akora zavamaniry sy hena izy ireo. Any an'ala dia mihinana ny mamimbony, voankazo, bibikely ary na vorona kely, atody na biby mpikiky aza. Ity sakafo ity dia sarotra be ihany ny mamerina amin'ny fahababoana. Mamelona azy ireo sakafo isan-karazany ny olona manandrana maka tahaka ny sakafony voajanahary araka izay tratrany. Ny olona sasany dia mamahana bibikely toy ny crikety, worworm, savoka, samoina sy hala. Ireo bibikely dia tokony homena sakafo avo lenta toy ny cricket cricket ara-barotra ary alefa miaraka amin'ny fanampiana vitamina / mineraly feno. Noho izany ny anaran'izy ireo, ny glider glider dia tia ny tsiron'ny siramamy. Tian'izy ireo ny cocktail voankazo. Ny voankazo dia tokony hohanina kely, voatetika miaraka amin'izay ny glider tsy afaka misafidy izay tiany fotsiny. Ny sasany mampifangaro tsindrona antsoina hoe 'Recipe Mixbe an'ny Mixbeater', izay rano mafana 150 ml, tantely 150 ml, atody iray voahidy, atody nandrahoina, serealy proteinina 25 grama ambony ary 1 tsp famenon'ny vitamina / mineraly. Afangaro amin'ny rano mafana sy tantely. Afangaro ny atody dia ampio tsikelikely ny fangaro amin'ny rano / tantely. Afangaroy ny vovo-vitamina mandra-pahavitany, ary avy eo afangaroy amin'ny serealy zazakely mandra-pahatonga azy ho malama. Ahirizo anaty vata fampangatsiahana mandra-pahatonga azy. Na dia tia voanjo aza ireo mpitsabo siramamy, dia tokony homena kely ny voanjo, satria mety hiteraka olana ara-pahasalamana.
Raha manome loharanon-karena ampy ianao dia hikarakara ny filan'ny fanatanjahan-tena manokana ilay mpandilatra siramamy.
Amin'ny fahababoana, ny glider siramamy dia mora tohin'ny lamosin'ny tongotra miverina. Heverina fa mety hiteraka tsy fahampiana izany. Azo sorohana sy tsaboina amin'ny vitamina D, E ary calcium. Ny voanjo sy ny voa dia tokony hohanina kely dia kely, satria ny glider glider dia mora tohina, toe-javatra mitovy amin'ny fitohanana.
Amin'ny fahababoana, ny vehivavy dia mety manana litters telo isan-taona. Any an'ala dia mazàna manana litters iray na roa isan-taona izy ireo. Matetika izy ireo dia hiteraka kambana ary indraindray koa telozoro. Ny glider vehivavy siramamy dia manana paosy izay hipetrahan'ny zanany ao anaty paosy mandritra ny 70 andro voalohany. Avy eo mandritra ny volana manaraka na kely dia hijanona ao amin'ny akaniny ireo zazakely. Rehefa afaka 3½ volana teo ho eo dia hanomboka hiaraka amin'ny reniny sy ny rainy ireo mpamily tanora.
Teratany Australia, Tasmania, New Guinea ary ireo nosy mifanila amin'i Indonezia. Ny glider glider dia hita any anaty ala ala izay be orana ary any no ahitana ny Acacia Gum sy ny kininina, toy ny any an'ala, ireo no tena loharanon-tsakafony.
'Ny glider vadiko vavy miaraka amin'ny zanany voalohany.'
mpampijaly amerikana manga sy fotsy
'Glider siramamy lehilahy manana sakafo faran'izay tiany!'
Bettie ilay glider siramamy
Pitbull mena mena 5 volana
Corgi sy manga heeler mifangaro